Uyenza njani i-Banner yeTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani ibhena yeTwitch?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 445
Kubantu abaninzi ukuyila izinto kunye nokwenza umxholo wegraphic ayisiyonto ilula. Ke ngoko, xa kufikwa ekwenzeni olu hlobo lomxholo, bakhetha ukubhenela kubantu abakhethekileyo kuloo ndawo, oku kuhlala kuyinto onokukhetha kuyo, kodwa xa ungenayo imali eyoneleyo, akukho khetho ngaphandle kokwenza lo msebenzi kwaye uzame ukwenza iziphumo zibe zezona zihle.
Xa kuziwa kwizibhengezo kungcono ukusebenzisa izixhobo zoyilo, uninzi lunokuba nzima kwaye lubize. Kodwa i-intanethi ibonelela ngezixhobo ezininzi zoyilo Banokuba luncedo kakhulu xa kusenziwa olu hlobo lomxholo wedijithali. Ukwenza njalo akuyi kuthatha thuba lide kwaye wakube umsebenzi wenziwe kakuhle iya kuba sisiqwenga sekhekhe. Eli nqaku liza kubonisa ezinye zezona zixhobo zibalaseleyo zokwenza iibhena zeTwitch.
Ukutshintsha ngokwezifiso iakhawunti
Xa uthetha ngeTwitch ibhekisa kwiqonga elivumela abasebenzisi ukuba basebenzisane ngokuthe ngqo nomntu owenza umxholoInethiwekhi apho abasebenzisi bavunyelweyo ukwenza kwaye bonwabele usasazo ngqo phantse iiyure ezingama-24 ngosuku.
Ke, ijelo ngalinye lichongiwe lahlukile kwaye kuyacaca ukuba Wonke umntu odala umxholo ufuna ukoyisa okuseleyo. Ngesi sizathu, bavunyelwe ukukhwela ibhena, apho izinto ezithile zomxholo wejelo ziboniswa kwaye ke nabantu banokuyila kwaye benze ngokwezifiso, ukuze babonakale kwabanye.
I-Twitch inokukhetha, ke bonke abasebenzisi banokwenza isiteshi sabo benze ngokwezifiso, licandelo "iTwitch template", ukusebenzisa kwayo kulula ngokwenene. Kodwa into ekufuneka iqatshelwe kukuba phantse zonke izinto onokukhetha kuzo zivumela isimntwiso kwaye ngenxa yoko uhlengahlengiso ngokweemfuno zomnini wejelo.
Izixhobo zokwenza iibhanile zeTwitch
Njengoko sele kutshiwo, abantu abaninzi abanazo izakhono eziyimfuneko zokusebenzisa izixhobo ezinzima ezifana neFotohop, nokuba banazo izakhono abanakho ukuba nezixhobo zokuzihlawulela, kodwa i-intanethi ibonelela ngeendawo ezininzi apho abo bazifunayo Banokubhenela kwiitemplate kwaye babenze ngokulula ukuba bazisebenzise kwisitishi sabo.
Ukuba sisisombululo esilula kwaye sikhawuleze ngokwenene kunjalo yiya kuGoogle kwaye ukhangele "itemplate yebhena yeTwitch", Kuya kubakho izigidi zamaphepha ezikuvumela ukuba wenze ibhena, uninzi lwazo zilula kwaye simahla, phakathi kwala maphepha okuhlela kwi-Intanethi kulungile ukuqaqambisa oku kulandelayo:
Nerd okanye Die.
Zonke ezi zixhobo zoyilo ezingathathi ngxaki zininzi, ezinye zisimahla kwaye ezinye kufuneka zihlawulwe. Kodwa nayiphi na, izakuvumela ukwenziwa koyilo olulula nolomtsalane.
1 Ukutshintsha ngokwezifiso iakhawunti
1.1 Izixhobo zokwenza iibhanile zeTwitch
Uyenza njani uphando kuFacebook?
Indlela yokubeka iingoma kwiTwitch?